Runako uye utano Cosmetics
Mukati, mukadzi wese anoshandisa inki, nokuti unogona kusiya zvose zvinoshongedza zvinonhuwira, asi kuti urege usina hanya nezvinhu zvakadaro zvakakosha zvechitarisiko chemukadzi, sejeri, hazvina kugadziriswa. Kusarudza mascara yakanaka uye yakakwirira yakaoma, asi kana ukaona kuongororwa kwechigadzirwa ichi, unogona kukurumidza kusarudza mascara iyo ichava "yako" mune zvose.
Mascara Maybellin Great Lash
Muchiyero chemascara Maybellin Great Lash ndeimwe yemiganhu yekutanga. Inonyatsopisa cilia yako yose, ichiita kuti iwedzere. Mukugadzirwa kwechitunha ichi kune mavara emhando dzakasiyana-siyana dzinogadzira kunyange muto wakaoma. Kubwinya kweMe Maybellin Great Lash isina michero, saka mukadzi wese mushure mokushandiswa kwake achava nekutarisa kwekunaka uye kunoshamisa.
Kare mushure mekushanda kwekutanga, vasikana vazhinji havazoedzi kunyange zvimwe zvipfeko kubva pachiyero, sezvo ichi mascara:
inoita eyelashes nguva refu;
nyore kushambidzwa kubva.
Mascara Lancome - imwe yemascara yakanakisisa. Inoita kuti eyelashes iparadzaniswe, yakawanda uye yakareba, iyo iyo yakanyatsonyoroveswa, nokuti inotarisira mapurimi. Lancome yakapinda mu "Best Mascara" kukosha nokuti inoita eyelashes elastic and soft.
Vakadzi vakawanda vanoramba kutenga mascara, nokuti inodhura. Asi nzira inoshandiswa pairi, yakarurama. Kusiyana nemakwikwi ayo, zviri nyore kushandisa, mushure mokushandisa kwacho hakuna mavhinga, uye cilia inotarisa chaizvo.
Mascara Bourjois Beauty'Full Volume
Nhamba yemascara yakanakisisa yepamusoro eyelashes inenge isisina kukwana pasina Bourjois Beauty'Full Volume, nokuti chigadzirwa ichi chinoshamisa chinoumba fantastic volume! Bhuroti rayo rakanyatsogadzikana kubata, rinonyatsovhara cilium yose uye rinoramba richiona maawa anopfuura 24.
Kubatsirwa kwaBourjois Beauty'Full Volume kunosanganisirawo kuti iyi mascara:
rinogona kushandiswa kakawanda (cilia ichakura zvisingagumi);
Zviri nyore kushambidza;
inogona kushandiswa kune unyanzvi hwemifananidzo shots (inoita kuti chitarisiko chive chakazaruka uye chakajeka).
Mascara L`Oreal Telescopic Explosion
Muchiyero chezvitunha zvakanakisisa L`Oreal Telescopic Explosion yakaroverwa nekuda kwebhurashi. Iine chimiro chakakomba uye inosanganisira setae maduku. Anokwanisa kuita chero kufamba kwakasiyana-siyana, izvo zvinokubvumira kupora eyelashes kubva pachigadziko chavo kusvika kune zvakananga.
Kana iwe usingazivi kuti mascara ndeipi yakanaka kune eyelashes duku, edzai L`Oreal Telescopic Explosion. Nekubatsira kwayo iwe unogona kupora zvakanaka kunyange yakaonda uye yakapfupika cilia mujeri rezasi.
Mascara Factor Nhema yeRash Effect
Chinhu Chikanganiso Chine Mhedzisi - Mascara, iyo yakasikwa zvakakwana kuti ibudirire maitiro eyelashes makuru echokwadi . Pamusana pekuisa maruva uye bharoshi huru, inenge inowedzera kaviri ivhu uye inokwidza eyelashes ose. Chinhu Chine Mhedzisi Yenhema Iinewo mishonga, naizvozvo haisi yakachengeteka chete kumeso, asi unovatarisira zuva rese.
Dior Diorshow - chiremba mascara, asi inogona kushandiswa muupenyu hwezuva nezuva. Kuonga kubhururuka kukuru uye kumativi ose, iyo panguva imwechete inopa eyelashes uye ivhu , uye urefu, uye benderedzwa yakanaka. High pigment content muDior Diorshow inokubvumira kuti unyatsopenya eyelashes, pasina gluing kana kuirema.
Iyo yakasanganiswa yakagadzirirwa yechitunha ichi inoita kuti huve nekusimba uye kutsva kwekaiswa yakashandiswa kwemaawa gumi nemaviri, naizvozvo sechikonzero chekushandiswa kwayo maziso akaumbwa nemafuta akaoma uye ane masikati zuva rese.
Apricot kernel mafuta
Good foundation foundation
Nzira yekusarudza blush?
Oily skin of the face - treatment
Gel kuti meno apfeke
Mazamu emavara matsvuku uye bvudzi rakachena
Iva nekamu mushure memakore makumi mana - kuverenga
Eye Shadow - iyo yakanaka
Gadzira-up kwemaziso makuru
Nzira yekushandisa sei kubhodhi?
Gem kubva maapuro echando - zvinonaka zvekupora mavitamini uye zvepakutanga billet
Tritons mu aquarium - kugadziriswa nekuchengetwa kwechikafu chinoshamisa
Krisimasi muti we thread
Scandinavian kufamba - zvinopesana
Pasita nehuku uye mushwa
Ungasarudza sei mavhidhiyo evana?
Hama Céline Dion
Ndeipi inopisa mvura yekunhurira?
9 Nzira Dzokurwisa Musoro Wemafuta
Nzira yekuisa sei nzeve dzeYorkshire terrier?
Mutengo we erythrocyte sedimentation ndiyo inowanzo vakadzi
Zvokudya zve Surgut
Apple yakachengetedzwa - nhoroondo yezororo
Linoleum yekicheni - kuti unzwisise sei zviri nani kusarudza kirasi nemuvara?
Chicken fillet mumuchero muchu
Corner sofa mukati mekunze
Natalya Vodyanova akaratidza vana vake vose